एउटा डाेजर जिन्दगी ! – Enepal Khabar
एउटा डाेजर जिन्दगी !
युगकाे एउटा डाेजर क्रान्ति
एउटा पातलो कदको युवा उमेरले २५,२६बसन्तको नेराफेरोमा टेकेकाे ।
फागुन महिना चिसाेकाे बिदाइ र गर्मिकाे अागमनकाे समय । घडि मध्यान्तरतिर लरखराइरहेकाे हुदाे हाे । दिनकाे १२ बजे ।
सुर्यले अाफ्नाे तापकाे मात्रा बेस्सरि बढाउने समय पनि त हाे १२ बजे । घाम चर्किदै थियाे घाम जस्तै चर्किदै थियाे मनपनि ।कारण डाेजर बिग्रिएकाे थियाे त्यतिबेला ।
हातभरी हाइड्रोलिक र तेल अनि मेसिनको कालो छापिएको छ । निधार र घाटिभरि पसिनाकाे सानाेतिनाे बलेि खसिरहेकाे हुदाे हाे ।
पाइन्ट र शरिरमा मात्र हाेइन नाक कान र अनुहारमा पनि कालाे माेविल दलिएकाे थियाे । आफ्नो तौल भन्दा ११ सय गुण बढि तौल भएको डोजरको बकेटलाइ उनले उचालि रहेका छन् एउटा ठाडाे र ठेट्ने मानिले ।
बकृट उचाल्दै पत्थरमा बजारिरहने उनकाे काम । बकेट पत्थरमा बजारिन्थ्याे त्यसकाे अावाजर थर्काईले वरपर पनि हल्लिन्थ्याे ।
प्रकाश ,,,, । विहानाको ७ बजेपछि उनको दैनिकी सुरु हुन्छ । डोजर चलाउने उनकाे काम । देशकाे मामाटाे डाेजरसंग खेल्ने यी युवाकाे दिनहरु डोजरसँगै वित्छ ।
जीवनमा मिल्ने र साथ दिने धेरै चिज हुन्छन् ।समयअनुसार धेरै साथी पनि हुन्छन् ।
बाल्यकालका साथी,स्कुलमा साथी, अन्य साथी अनि विभन्न मोडमा भेटिने साथी ।साथि भेटिन्छन् छुटिन्छन् तर प्रकाशलाई लागेकाे छ सबै भन्दा प प्रिय साथी नै डोजर हाेकि ? जसले दिन भुलाएकाे छ , जिवनधान्ने बाटाे बनाइदिएकाे छ ।
दुइवटा हात मध्ये एउटा बकेट उचाल्ने मानि र विभिन्न साइडमा लाने स्टान्ट छ ।
डाेजर जस्तै एउटा जिन्दगी
कानमा हेड सेट छ अनि हेडसेट स्मार्ट फोन सम्म पुगेको छ। स्मार्ट फोनमा २ सय जति हिन्दी र २०० बढि नेपाली विभिन्न विधाका गित रहेछन् ।
मोबाइलको बाटो भएर कानसम्म आउने नेपाली हिन्दी गायक गायिकाको आवाजको धुनमा उनी दिनभरी पत्थर र माटोसँग लड्छन् ।
लमो समय भयो दाइ डाेजर जिन्दगि बिताएकाे तै पनि जिन्दगी विन्दास छ, डोजर चलाइरहेका प्रकाश मुसुक्क हास्दै मतिर केन्द्रित भए । हातमा सुर्य चुरोटको खिल्ली उतारे अनि भने दाइ चुरोट खानुहुन्छ । नाइ खादिन! मैले भने । एउटा चुराेट मुखमा हाले अनि लाइटर पारेर तन्काए ।
एक झुक्का धुँवा आकाश तिर उडाए फेरि ताने ,हातको घडि हेरे ,बिहाना बाट खन्न सुरु गरेको ननस्टप ६ घण्टा भएछ ।
डोजरको जिन्दगी जस्तै छ दाइ हाम्रो जिन्दगी पनि उनी जिस्किए । जब डोजर विग्रिन्छ त्यसलाइ मेकानिकालले बनाउछ , तर स्वयँम म विग्रीए भने बनाउने मनको मेकानिकल कोहि छैन ।
प्रचण्डले डोजर चलाएपछि डोजर हेर्ने भन्ने व्यँग्यले सामाजिक संजालमा गतिलो खुराक बनेको थियो । तर नेपालमा डाेजर एउटा भगवान जस्तै बनेकाे छ ।
डाेजर क्रान्ति र डाेजर युग
डोजर देख्दा सामान्य भएपनि त्यसले गर्ने काम अकल्पनीय छ । भिर,पाखा,पहरा र खोला सबै ओदर्दै हिड्ने डोजर जस्तै सुरा डोजर चालकहरुको बाटो बनाउन ठुलो योगदान छ । विहानबाट बेलुका सम्म डोजर चलाएर बाटो उधार्नेहरुको जिन्दगी कमैले लेखेका छन् । अनि उनिहरुलाइ कमैले पढेका छन् । कत्तीको कठिन हुन्छ ? ठिकै हो दाइ,। ढुँगा माटो र पहाड सँग लड्ने काम यसरी नै चलिरहेछ ।।
विदेश गएर पनि काम गर्नपर्छ नेपालमै जागिर पाउनु ठुलो कुरा हो उनी काममा सन्ताेष देखिए ।दुइ तिन बर्षको विचमा सयौ किलोमिटर बाटोसँग परिचित भए, कति घर,वारि ,खेत र पहाड अाेदारे । । उनको शरिर र डोजरमा धेरै ठाउँका माटो मिसिएकाे छ ।
त्यो एउटा बुढो डोजरले धेरै ठाउँका पत्थर र ढुँगामाटोसँग युद्ध लडेको छ । जसरि एउटा सिपाईले जीवन र मृत्युकाे युद्द लड्छ ।
बाटो खन्न र डोजर चलाउन उचित ज्ञान,शिप र आँछ साहस पनि चाहिन्छ । नत्र बाटाे खन्दा पाेखराका मेयरले पत्रकार लन्नाए झै हुन्छ उनी हासे फेरि ।
कति कमाउछौ ? कमाइको के ग्यारेण्टि छर दाइ , काम चल्दा राम्रै कमाइ हुन्छ । पैसा थोरधेर कमाइन्छ ,त्यो भन्दा बढि त आत्म सन्तुष्टि पनि कमाइएको हुन्छ ।
आफैले खनेको बाटोमा गाडि हिड्दा खुसीको सिमा हुन्न । पैसा त दुइचारसय दिए पनि हामीले गरेका योगदान मनमनले सोच्छु । तर काम गर्नेको इज्जत कस्ले पो गर्छर दाँइ ? उनी चुरोट तानेर फेरि डोजरको क्याविनमा छिरे अनि घुइया डोजर स्टार्ट गरे ।
डोजर चलाउन पुर्व सिन्धुलीबाट बागलुङ आएका प्रकाशको डोजर जिन्दगी विन्दास छ । डोजर चलाउने अनुभव मात्र होइन,यो क्षेत्रमा लाग्दाका तितामिाठा सबैखाले अनुभव बटुलेका छन् उनले । नयाँ नयाँ ठाउँमा पुग्दा फूल मालाले सम्मान मात्र होइन,बारी खेत र अाफ्नाे जग्गा च्यापियो भन्दै कुट्न आउँदा ज्यान जोगाउनै कठिन भएका क्षणहरु पनि अनगिन्ती छन् उनीसँग ।
प्रकाश र प्रकाश जस्तै हजारौ युवाहरुलाइ डोजरले राम्रो रोजगारी दिएको छ । साइटमा डोजर विग्रीदा, कठिन काम पर्दा र पहाड फाेर्दा ,जस नपाउदाका अनुभव त उनी सँग कति छन् कति ।
कहिले मेसिन विग्रीएर तनाव बनाउछ,कहिले मन विग्रीएर तनाव । हजारौको सँख्यामा डोजरहरु आएपनि डोजर चालक र सहयोगीहरु केवल साहुहरुलाइ माथि पुराउने भ¥याङ जस्ता बनेका पनि छन् ।
करोडौ लगानी गर्ने साहुहरुले कमाइ गर्नु त पर्छ नै तर चालकहरुलाइ तलब नदिने डोजर मालिकहरुको सुची पनि लामै छ । दादागिरी र हर्ताकर्ता ठेकेदारहरु नै निर्माण क्षेत्रम लाग्छन् कोहिकोहिले पैसा माग्दा ज्यान नै जाला है भनेर थर्काउने समेत गर्छन ।
ज्यान जोखिममा पारेर काम गरि समयमै तलब नपाउने कतिपय डोजर चालकको गुनासो छ ।
पहाराहरुसँग खेल्दा,ढुँगाहरु सँग खेल्दा माटाहरुसँग खेल्दा खतरासँग खेले जस्तो हो । धुलो धुवा र पत्थरहरुसंग खेल्न , दरिलो आँट र अनुभव चाहिन्छ डोजर चलाउन । अहिले सानासाना बालकालिकको मुख्य खेलौना डोजर हून्छ । उनीहरुलाइ डोजरले बाटो खनेको देख्दा निकै खुसी लाग्छ ।
बाल्यकालमा पढाइ लेखाइ छाडेर टेक्निकल लाइनमा लागेका प्रकाश सुरु सुरुमा डोजरको हेल्पर बनेर हिडेका थिए । ड्राइभरले भनेको मान्ने,सामान सार्ने,किल्ला कस्ने अनि यताउता सहयोग गर्ने । डोजर छोएर चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनको आशा मनमै मथ्र्यो । खाली समयमा कयविनमा छिरेर डोजर चलाउन पाउँदा निकै खुसी लाग्थ्यो । विस्तारै डोजर छुँदा छुदै ड्राइभर भएरै छाडिायो ।
विकासको जिम्मा धेरैले लिएका छन् । नेतृत्वले ,निर्माण कम्पनी,ठेकेदार,इन्जिनियर ,ओभरसियर अनि कामदारहरु । विकास योजनालाइ पुर्ण गराउने प्रत्यक्ष रुपमा धेरैको हात हुन्छ । सा्रेता साधन जुटाउन देखि लिएर योजना सम्पन्न गर्ने बेला सम्म धेरैको सहकार्य र परिश्रम पर्छ । त्यहि योगदान श्रमबाट ठुलाठुला आयोजना सम्पन्न हुन्छन् । चिल्ला सडक,ठुला ठुला हाइड्रपावर,भवन र पुलहरु,नहर,सिचाइ सबै आयोजना सम्पन्न गर्न प्रत्यक्ष रुपमा प्रयोग हुन्छन् अनेक थरी मेसिन । भैसी उक्लिन नसक्ने बाटाहरु, डरलाग्दा भिरहरुमामा जिप र बसहरु गुडाउने महत्वपुर्ण योगदान दिने मेसिन मध्येको एउटा मेसिन हो डोजर, अर्थात म्याकुर । विदेशमा सडकका खाडल खन्न,घरका जग खन्न,बालुवाहरु निकाल्ने काममा प्रयोग हुने डोजर जब नेपालमा भित्रीयो एउटा क्रान्ति नै ल्याइदियो
डोजरको क्रान्ति भिमकाय पहाडहरुमा मोटरर गुड्न सम्भव भयो । भिर ओधर्यो,पाखा ओधरिदियो हामीलाइ कच्ची सडकहरको सन्जालमा जोड्न सहयोग गर्यो । अहिले नेपालमा अत्याधिक प्रयोग हुने यन्त्र मानव हो डोजर । जसले दिनहु जसो नेपाली भुमि खनिरहेको छ । बाटो खन्ने, नाली खन्ने,घरको जग खन्ने,हाइड्रो पावरको सुरु« खन्ने ,पुल खन्ने ।
डोजर नभित्रीदोहो त नेपालमा अहिले भएका कच्ची सडकहरु बन्ने थिएन । त्यसैले अहिलेको विकासमा डोजर क्रान्ति सबैभन्दा बढि चलिरहेको छ । गाउँघर र जिल्ला अनि देश कै बजेट सक्नेमा सबैभन्दा अग्रणी स्थानमा रहेका छन् डोजर । बागलुङ जिल्लामा मात्र १०० भन्दा बढि छन् । देशभरमा १० हजारको हाराहारीमा डोजर छन् र त्यी डोजरले देशखनिरहेका छन् । झण्डै झण्डै डोजर खरिद मै खर्बौ रुपैया विदेश पठाएका छौ । एउटा ठुलो चेन वाला डोजरको मुल्य एक करोडको हाराहारीमा र सानो जेसिविको ६० लाख बढि पर्छ ।
नयाँ यन्त्र र मेसिनको प्रयोगले छोटो समयमा ठुलो उन्नती गरिदै छ । मान्छेहरु भन्दा सयौ गुण बढि काम मेसिनले गर्छन । मान्छे मेसिनका कारण विस्थापित छ एकातिर भने मेसिनले मानव जीवनलाइ सहज बनाइदिएको छ अर्केातिर ।
मेसिन धेरै आएर पनि होला आजकाल मान्छेहरु मान्छेसँग पनि मेसिनलाइ जस्तो व्यवहार गर्न थालेका छन् । मेसिनको युगमा मान्छे मेसिन भन्दा कमजोर छ । मेसिनको प्रयोगले मान्छेहरुमा मानवियता र सहयोगी भावको मुटु पत्थर बन्दै गएको छ । उचित तरिकाले मेसिनहरु नचल्दा भूक्षय बाढि पहिरो र पर्यावरणमा समेत असरपर्छ । विकासको मेरुदण्डका रुपमा क्रान्ति गरिरहेका
डोजरलाइ मेरो नमन अनि डोजर हाक्ने चालकलाइ पनि ।
१३ आश्विन २०७५, शनिबार १९:३८ मा प्रकाशित
अमेरिकामा सकियो राजेशको नया गीतको रेकर्डिङ, “जुनी भरी संगै जिउँला” ले पायो तारिफ